Ukuphakamisa Nokufaka-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>Isisindo Esindayo>Ukuphakamisa Nokufaka
Izinhlobo ezinhlobonhlobo zezinto zokuhamba kumele zenziwe ekuthuthweni kwama-cargos asindayo kumaphrojekthi wobunjiniyela basekhaya nowamazwe omhlaba, ovame ukukhawulwa yizindlela zokuhamba ezinjengomthamo wokuphakama, izimo zomgwaqo, umgwaqo kanye nomthwalo webhuloho wokulayisha, ububanzi bomhubhe nokuphakama kanye neminye imithetho yasendaweni, eyenza inqubo inzima futhi ibe yinkimbinkimbi.
Ungakuqeda kanjani ukuthutha ama-cargos asindayo ngokuphepha, ngokwezomnotho, ngokuphumelelayo nangokunengqondo kuyisihluthulelo sokwenza umsebenzi ngempumelelo.
Ukuthuthwa kwama-cargos asindayo kuzobheka izimo zangempela, indawo yokukhiqiza, indlela yokuhamba, izindlela zokuhamba, ukulayisha kanye ukulayisha imbobo, imishini yokuphakamisa indawo nezinye izinto ezihlobene ngakho-ke kuyadingeka ukwenza ucwaningo lokwenzeka.
Ukuphakanyiswa ngempumelelo kwe-cargos esindayo kuyiphuzu elibalulekile lokuqaliswa kwamaphrojekthi wobunjiniyela. Izinyathelo ezithile kumele zilandelwe ukuze kuqinisekiswe ukuqedwa ngempumelelo kokuphakama nokufakwa.
Inqubo yokusebenza yokuphakamisa nokufaka
Ukuhlelwa kwe-1.Equindows on site: hlela imishini esindayo ukukhuphuka uphinde ufake ngemuva kokuthi wonke amalungiselelo eseqediwe.
Umsebenzi wokulungiselela ngaphambi kokuphakama: ukuhlolwa ngokucophelela nokuqinisekiswa kuyadingeka.
Isibonelo.Bheka ukuthi imishini inamamaki wokufaka kanye namamaki okufaka umugqa alungile; ukuthi izinsimbi eziphakamayo zemishini ziyahlangabezana nezidingo zokuphakamisa
3.Lashing of hoisting rigging: ikakhulukazi kubandakanya ukufaka i-lug ye-pulley, ukungezwani kwengqondo nokulungiswa kwe-azimuth kwe-winch kagesi, izilungiselelo zokuphonsa ngohlelo lokulinganisa.
Isivivinyo sokuphakamisa: ngaphambi kokuhlolwa, hlola bese uqinisekisa okulandelayo:
Umyalo ojwayelekile wokuphakamisa uveza ukuvezwa kokusebenza kokuphakama; hlela amaphuzu asemqoka nokuqukethwe okusemqoka kokunikeza izikhala zokugada ukuze ziqondiswe; ukuvivinya kaninginingi kokuhlolwa nokuphakanyiswa kwenza zonke izingxenye zisebenze ziphephe futhi zihleleke futhi zibukeze izinguquko zezingxenye ngazinye.
5.Ukusiza esizeni: umphathi-jikelele-jikelele uyalela ngokusemthethweni onke amasekela ukuba ahlole isimo sokuma kokuthunyelwe ngakunye futhi ahlole ukuthi uhlelo lwezimpawu zomyalo lujwayelekile yini; futhi wazise abasebenzi abasetha imiyalo ngezibonakaliso.
Ngesikhathi sokuphakamisa, yenza imishini iyeke lapho ishiya ukwesekwa kwesikhashana ngenhla kuka-500-800mm futhi wenze okunye ukuhlola ukuze uqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle;
Okulandelayo ukususa ukusekelwa kwemishini bese uqhubeka nokuphakamisa.
Amanothi wokusebenza kokuphakamisa i-crane
1.Kususa noma kwehle
(1) I-torque egcwele ngokweqile noma elilinganiselwe ngokweqile ayinqunyelwe ngokuphelele ngokuya ngohlu lomthwalo.
Vimbela ukunqamula ekuxhumeni ngohlelo lwe-ACS ngesikhathi senqubo yonke yokusebenza kwe-crane.
Prohibit Hudula ama-cargos kusuka ngaphambili noma eceleni kwengalo.
Vimbela ukuphakamisa umthwalo kusuka ngaphambili kwekati.
(2) Ungacindezeli futhi udonse induku yokudlala kanzima ngesikhathi sokuhlinzwa.
Ngaphambi kokuphakamisa, qiniseka ukuthi i-clutch lever endaweni yokuxhumeka.
(3) Ukuwa kwamahhala kungasebenza kuphela lapho uphonsa i-hook noma lapho umthwalo ungaphansi kwama-30% womthwalo ovunyelwe. Ukubanjiswa okuphuthumayo ngokuwa kwamahhala akuvunyelwe.
(4) Isondo lesigubhu esinyakazayo kufanele likhiywe lapho siphakamisa umthwalo ukuhlala isikhathi eside. Kepha ungakhiyi isondo lesigubhu ngenkathi kwehla umthwalo.
(5) Naka isixwayiso lapho uphakamisa ukusebenza.
(6) Akekho ongena endaweni yokusebenza yokuphakamisa ngaphandle kwabasayine.
(7) Ngesikhathi sokuphakamisa, gcina ibanga lokuphepha phakathi kwesiqongqangi se-boom nesikhungo somugqa ophakathi kwe-①6.6kv / 3m ②66k / 5m③275kv / 10m, uma ngabe kukhona izingozi zokushaqeka kukagesi.
(8) Lapho ojantshi ababili bephakamisa umthwalo ndawonye, ​​kuyadingeka umphathi onobunye. Ngaphandle kwalokho, ukusebenza kanye nesivinini sale miqhele emibili kufanele kugcinwe okufanayo. Inani ngalinye lomthwalo owabiwe kufanele libe ngaphansi kwama-80% omthwalo ophelele ohlanganisiwe;
(1) Gwema noma ikuphi ukubopha okuphuthumayo noma i-rotary uma kwenzeka usengozini yokujaha umthwalo.
(2) Ngesikhathi sokujika, umshayeli kufanele anake ukuthi ngabe kukhona abantu abasebhodini noma kukhona izithiyo ngemuva.
(3) Khiya ibhuleki lokujika lapho usuqedile.
(1) Akukho umthwalo owengeziwe nge-lever arm.
(2) Lapho i-telescopic boom isetshenziswa, kufanele kube khona ibanga elithile phakathi kokuphonsa kanye nokugoba.Uma uphakamisa ingalo yangaphandle, igwegwe kufanele lihlale liphansi ngangokunokwenzeka.
(3) Lapho i-lever main arm inganwetshwa ngobude obugcwele, ikona lengalo ngeke libe ngaphansi kwelele elincane elishiwo kwincwajana yokusebenza, uma kungenjalo wonke umshini uzowina.
I-crane yesondo ethwele umthwalo
Lapho i-wheel crane ethwele nomthwalo, umgwaqo kufanele ube bushelelezi futhi uqine, futhi isisindo somthwalo kumele uhambisane nemithetho yabakhiqizi. Ukuphakama kwama-cargos asindayo ngeke kudlule ku-50cm kusuka emhlabathini, kuboshwe ngentambo yokudonsa.Uhamba kancane.
Ukuhamba ibanga elide ngomthwalo akuvunyelwe ngokuphelele
Izeluleko ze-5.Operation ngemuva kokuphakamisa
(1) Khipha ngokuphelele i-boom yokuphakamisa bese uyibeka kubakaki.
Ukulungisa izingwegwe njengoba kudingeka futhi ubhule itafula elijikelezayo
(2) Imilenze izophinda idonswe ngokulandelana okunqunyiwe bese ivikelekile
(3) Shayela i-crane emuva endaweni yokupaka
Ama-Sohologistics ayakwazi ukuhlinzeka ngemishini ehlukahlukene yokuphakamisa kanye neyoku skringing ukwenza isiqiniseko sokuqaliswa ngempumelelo kwephrojekthi ye-cargos ngayinye esindayo.
Imishini ephambili yokuphakamisa ifaka amaloli e-forklift, imishini yokushayela iloli, imigwaqo ekhasa ngokukhamba, iloli le-module elizihambisayo (iloli elizihambisayo le-hydraulic flatbed) crane, imishini yokuntanta.
IZINSUKU ZOKUXHUMANELA IZIMALI ECHINA
Uhlobo IZITOLO ZAMABHODI Abathengisi abasebenza ngokujwayelekile AMAKHANDA AMANDLA ROUGH TERRAIN CRANES IZITOLO ZESIKHWAMA IMISEBENZI
Kukalwe Ububanzi Bokulayisha
I-Jacking kanye ne-skidding isetshenziswa kabanzi ukuhambisa izakhiwo ezinkulu ngesikhathi ngasinye samaphrojekthi we-Sohologistics. Le misebenzi iphumelela kakhulu ngamaqembu wezobuchwepheshe anamakhono okusebenza.
Njengasikhathi sonke, ngenkathi kukhiqizwa izixazululo ze-bespoke kumakhasimende ethu, ukuphepha kuhlala kuyinto enkulu kakhulu okufanele icatshangelwe.
1.Hydraulic jacking kanye ne-skidding isingeniso esifushane
I-Hydraulic jacking kanye ne-skidding emplacement technology inezingxenye ezintathu: ujantshi, ukulala kanye ne-hydraulic jacking kanye ne-skidding system system.Isihluthulelo salobu buchwepheshe bokwakha ukusetshenziswa kwe-hydraulic jacking kanye ne-skidding device. Sakhiwa ikakhulukazi isiteshi esikhulu samaphampu omfutho we-super high, i-hydraulic jack ne-orbit esindayo yemithwalo esindayo.
Ngokusebenzisa i-hydraulic jack esiteshini esikhulu samaphampu kawoyela, i-transformer iphakanyiswa ngasikhathi sinye, ngakho-ke ujantshi ungabekwa ngaphezulu kwe-transformer. futhi iyunithi lokuhambisa imithwalo esindayo e-orbit eshukumisayo ihambisa i-transformer etholakala.
I-2.Hydraulic jacking kanye ne-skidding isimiso sobuchwepheshe kanye nobuchwepheshe bokwakha
(1) Imigomo yezobuchwepheshe
I-Hydraulic jacking kanye ne-skidding technology i-hydraulic: amashubhu amabili we-hydraulic axhuma isiteshi samaphayiphi we-hydraulic jacks, futhi ngasikhathi sinye, asebenza kakhulu isiteshi samaphampu kaphethiloli onendawo ezintathu zesikhundla esine-valve, uwoyela we-hydraulic uzophuma nengcindezi kanye ne-hydraulic jack ngokulandelana. jacks the transformer ngaphansi kwesitimela bese iqaqa umthwalo osindayo we-in-orbit esisekelo se-transformer. Kamuva, ngokuxosha umgibeli ngaphandle kwesitimela futhi esiteshini sepompo sehla, i-transformer ibuyela esisekelweni.
(2) Ubuchwepheshe bokwakha
Ukuhamba kwenqubo yokwakha:
Ukunquma indlela eguqulayo ye-transformer
Indlela yokuhambisa kanye nokuhlanza isiza
I-jacking transformer ngokucindezela kwe-hydraulic
I-Transformer jacking futhi yehla ngokucindezela kwe-hydraulic